Celebrities Archives - Page 273 of 285 - ShwengweGames
သိနျး ၈၀၀ ကိစ်စအစှပျစှဲခံရမှုကိုဦးရောဘတျစနျးအောငျနဲ့မကျြနှာခငျြးဆိုငျဖွရှေငျးလိုကျတဲ့ လငျးလငျး
May 22, 2020 by Shwengwe Games
မကွာသေးခငျက လူမှုကှနျရကျပျေါမှာ ဗဈတိုးရီးယားအမှုကိစ်စနဲ့ပတျသကျတဲ့အသံဖိုငျတဈခု ဂယကျရိုကျခဲ့ပါတယျ။ အနုပညာရှငျတှရေဲ့အတှငျးရေးတှကေို ဖျောထုတျလရှေိ့တဲ့ ဟနျငွိမျးဦးအကောငျ့ပိုငျရှငျကနပွေီးတော့ ဖုနျးအပွနျအလှနျပွောထားတဲ့အသံဖိုငျတဈခုကို ဖှငျ့ခခြဲ့ပွီး အဲ့ဒီအသံဖိုငျမှာတော့ ခတျေသဈဖောငျဒေးရှငျးကို တညျထောငျထားတဲ့ လငျးလငျးနဲ့ခဈြသုဝတေို့အကွောငျးကို ပွောထားတဲ့ စကားသံတခြို့ပါဝငျခဲ့ပါတယျ။
တဈနိုငျငံလုံး ဟိုးလေးတကြျောဖွဈခဲ့တဲ့ ဗဈတိုးရီးယားလေးရဲ့ အမှုကိုတော့ အမှုမှနျပျေါပေါကျဖို့ ပွညျသူတှအေလေးအနကျထားခဲ့ကွပွီး ဘကျပေါငျးစုံက အကူအညီတှပေေးခဲ့ကွပါတယျ။ ဒီအသံဖိုငျထဲမှာတော့ လငျးလငျးနဲ့ခဈြသုဝတေို့က ဗဈတိုးရီးယားအမှုကနေ ငှကေပျြသိနျး(၈၀၀)ခနျ့ အခြောငျရခဲ့ရတယျလို့ စှပျစှဲပွောဆိုခဲ့ပါတယျ။ အဲ့လိုပွောဆိုသူကိုတော့ လူအမြားအပွားက ရှနေ့ဦေးရောဘတျစနျးအောငျရဲ့အသံနဲ့တူတယျလို့ ပွောခဲ့ကွပါတယျ။
မနကေ့တော့ လငျးလငျးက သူကိုယျတိုငျ ဒီကိစ်စနဲ့ပကျသကျတဲ့အကွောငျးတှကေို ရှငျးဖို့ ဦးရောဘတျစနျးအောငျရဲ့အိမျကို သှားခဲ့ပါတယျ။ ပရိသတျတှလေညျး သိရအောငျ ဦးရောဘတျစနျးအောငျရဲ့အိမျကိုရောကျကတညျးက လငျးလငျးကိုယျတိုငျ Facebook Live လှငျ့ပွီးမြှဝခေဲ့တာမို့ မကွညျ့ရသေးတဲ့ ပရိသတျတှအေတှကျ ဒီ Live ဗှီဒီယိုလေးကို ပွနျလညျဖျောပွပေးလိုကျပါတယျနျော။
သိန်း ၈၀၀ ကိစ္စ အစွပ်စွဲခံရမှုကို ဦးရောဘတ်စန်းအောင်နဲ့ မျက်နှာချင်းဆိုင်ဖြေရှင်းလိုက်တဲ့ လင်းလင်း
မကြာသေးခင်က လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာ ဗစ်တိုးရီးယားအမှုကိစ္စနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသံဖိုင်တစ်ခု ဂယက်ရိုက်ခဲ့ပါတယ်။ အနုပညာရှင်တွေရဲ့အတွင်းရေးတွေကို ဖော်ထုတ်လေ့ရှိတဲ့ ဟန်ငြိမ်းဦးအကောင့်ပိုင်ရှင်ကနေပြီးတော့ ဖုန်းအပြန်အလှန်ပြောထားတဲ့အသံဖိုင်တစ်ခုကို ဖွင့်ချခဲ့ပြီး အဲ့ဒီအသံဖိုင်မှာတော့ ခေတ်သစ်ဖောင်ဒေးရှင်းကို တည်ထောင်ထားတဲ့ လင်းလင်းနဲ့ချစ်သုဝေတို့အကြောင်းကို ပြောထားတဲ့ စကားသံတချို့ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။
တစ်နိုင်ငံလုံး ဟိုးလေးတကျော်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဗစ်တိုးရီးယားလေးရဲ့ အမှုကိုတော့ အမှုမှန်ပေါ်ပေါက်ဖို့ ပြည်သူတွေအလေးအနက်ထားခဲ့ကြပြီး ဘက်ပေါင်းစုံက အကူအညီတွေပေးခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီအသံဖိုင်ထဲမှာတော့ လင်းလင်းနဲ့ချစ်သုဝေတို့က ဗစ်တိုးရီးယားအမှုကနေ ငွေကျပ်သိန်း(၈၀၀)ခန့် အချောင်ရခဲ့ရတယ်လို့ စွပ်စွဲပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ အဲ့လိုပြောဆိုသူကိုတော့ လူအများအပြားက ရှေ့နေဦးရောဘတ်စန်းအောင်ရဲ့အသံနဲ့တူတယ်လို့ ပြောခဲ့ကြပါတယ်။
မနေ့ကတော့ လင်းလင်းက သူကိုယ်တိုင် ဒီကိစ္စနဲ့ပက်သက်တဲ့အကြောင်းတွေကို ရှင်းဖို့ ဦးရောဘတ်စန်းအောင်ရဲ့အိမ်ကို သွားခဲ့ပါတယ်။ ပရိသတ်တွေလည်း သိရအောင် ဦးရောဘတ်စန်းအောင်ရဲ့အိမ်ကိုရောက်ကတည်းက လင်းလင်းကိုယ်တိုင် Facebook Live လွှင့်ပြီးမျှဝေခဲ့တာမို့ မကြည့်ရသေးတဲ့ ပရိသတ်တွေအတွက် ဒီ Live ဗွီဒီယိုလေးကို ပြန်လည်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
သဝနျတိုမိမှာစိုးလို့ Davika ရဲ့ ဇာတျကားတှေ ကိုတောငျမကွညျ့တော့ဘူးဆိုတဲ့ ထှနျးထှနျး
ကိုကိုထှနျးထှနျး လို့ ပရိတျသတျတှေ ခဈြစနိုးချေါကွတဲ့ သရုပျဆောငျ အဆိုတျော ထှနျးထှနျးကတော့ ဂီတလောကမှာရော သရုပျဆောငျလောကမှာပါ အောငျမွငျတဲ့ အနုပညာရှငျတဈဦးပါ။
တဈခြိနျက Examplez အဖှဲ့နဲ့အတူ ဂီတလောကမှာ အောငျမွငျမှုမြားစှာရယူနိုငျခဲ့သလို သရုပျဆောငျလောကထဲရောကျလာခြိနျမှာ သူ့ရဲ့ သဘာဝကတြဲ့ သရုပျဆောငျမှုတှကွေောငျ့ အကယျဒမီဆုကို ဆှတျခူးနိုငျခံတဲ့ မွနျမာနိုငျငံရဲ့ တဈဦးတညျးသော Rapper တဈယောကျလညျးဖွဈပါတယျ။
အဲ့ဒီလို အောငျမွငျမှုမြားစှာရယူထားပွီး ပရိတျသတျတှရေဲ့ အရူးအမူးအားပေးခွငျးကို ခံထားရတဲ့ ထှနျးထှနျးကတော့ သူကိုယျတိုငျကလညျး အခွားအနုပညာရှငျတဈယောကျကို အရူးအမူးအားပေးတဲ့ ပရိတျသတျတဈယောကျဖွဈလို့နပေါတယျ။
ထှနျးထှနျး အရူးအမူးအားပေးတဲ့ အနုပညာရှငျကတော့ မွနျမာပရိတျသတျတှလေညျး ရငျးနှီးပွီးသားဖွဈတဲ့ ထိုငျးမငျးသမီးခြောလေး Davika ပါ။ Davika ပါဝငျသရုပျဆောငျခဲ့ဖူးတဲ့ Pee Mak ဇာတျကား မွနျမာနိုငျငံမှာ ရုံတငျခဲ့စဉျက သူငယျခငျြးဖွဈသူ ဖွိုးမောငျမောငျရဲ့ တိုကျတှနျးမှုကွောငျ့ ရုံမှာသှားကွညျ့ဖွဈရာကနေ Davika ကို စှဲလမျးသှားခဲ့တယျလို့ ထှနျးထှနျးက ဆိုပါတယျ။
အရငျက Davika ရဲ့ ရုပျရှငျဇာတျကားတှကေို မလှတျတမျးအားပေးခဲ့ပမေယျ့ အတူတှဲသရုပျဆောငျတဲ့ မငျးသားတှနေဲ့ သဝနျတိုနရေတာကွောငျ့ အခုနောကျပိုငျးမှာ သူမရဲ့ ဇာတျကားတှကေိုမကွညျ့ဖွဈတော့ဘူးလို့လညျး သူက ပွောပါသေးတယျ။
” သူ ရနျကုနျကို လာသှားတုနျးက ပှဲတဈပှဲမှာ ဆုံဖူးပါတယျ။သူက အပွငျမှာလညျး တကယျ့ကို နှဈလိုဖှယျကောငျးတဲ့သူပါ။အဲ့ဒီတုနျးက ကြှနျတျော သူနဲ့ ဓာတျပုံတှဲရိုကျဖို့အတှကျ စိတျတှလှေုပျရှားပွီး ပြာယာတှခေတျနတောပဲ ” လို့ Davika နဲ့ အပွငျမှာဆုံခဲ့တုနျးက အတှအေ့ကွုံတှကေို ထှနျးထှနျးက မြှဝခေဲ့ပါသေးတယျ။
အခုလကျရှိမှာတော့ ထှနျးထှနျး ဟာ stay home ကာလကို အိမျမှာပဲ ဖွတျသနျးနပွေီး ဒီကာလကွီး ကြျောလှနျပွီးသှားပါက Examplez အဖှဲ့နဲ့အတူ အနုပညာလှုပျရှားမှုတှေ ပွနျလညျလုပျဆောငျဖို့ စီစဉျနတေယျလို့လညျး သိရပါတယျ။
သဝန်တိုမိမှာစိုးလို့ Davika ရဲ့ ဇာတ်ကားတွေ ကိုတောင်မကြည့်တော့ဘူးဆိုတဲ့ ထွန်းထွန်း
ကိုကိုထွန်းထွန်း လို့ ပရိတ်သတ်တွေ ချစ်စနိုးခေါ်ကြတဲ့ သရုပ်ဆောင် အဆိုတော် ထွန်းထွန်းကတော့ ဂီတလောကမှာရော သရုပ်ဆောင်လောကမှာပါ အောင်မြင်တဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ဦးပါ။
တစ်ချိန်က Examplez အဖွဲ့နဲ့အတူ ဂီတလောကမှာ အောင်မြင်မှုများစွာရယူနိုင်ခဲ့သလို သရုပ်ဆောင်လောကထဲရောက်လာချိန်မှာ သူ့ရဲ့ သဘာဝကျတဲ့ သရုပ်ဆောင်မှုတွေကြောင့် အကယ်ဒမီဆုကို ဆွတ်ခူးနိုင်ခံတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ တစ်ဦးတည်းသော Rapper တစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။
အဲ့ဒီလို အောင်မြင်မှုများစွာရယူထားပြီး ပရိတ်သတ်တွေရဲ့ အရူးအမူးအားပေးခြင်းကို ခံထားရတဲ့ ထွန်းထွန်းကတော့ သူကိုယ်တိုင်ကလည်း အခြားအနုပညာရှင်တစ်ယောက်ကို အရူးအမူးအားပေးတဲ့ ပရိတ်သတ်တစ်ယောက်ဖြစ်လို့နေပါတယ်။
ထွန်းထွန်း အရူးအမူးအားပေးတဲ့ အနုပညာရှင်ကတော့ မြန်မာပရိတ်သတ်တွေလည်း ရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်တဲ့ ထိုင်းမင်းသမီးချောလေး Davika ပါ။ Davika ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့ဖူးတဲ့ Pee Mak ဇာတ်ကား မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရုံတင်ခဲ့စဉ်က သူငယ်ချင်းဖြစ်သူ ဖြိုးမောင်မောင်ရဲ့ တိုက်တွန်းမှုကြောင့် ရုံမှာသွားကြည့်ဖြစ်ရာကနေ Davika ကို စွဲလမ်းသွားခဲ့တယ်လို့ ထွန်းထွန်းက ဆိုပါတယ်။
အရင်က Davika ရဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေကို မလွတ်တမ်းအားပေးခဲ့ပေမယ့် အတူတွဲသရုပ်ဆောင်တဲ့ မင်းသားတွေနဲ့ သဝန်တိုနေရတာကြောင့် အခုနောက်ပိုင်းမှာ သူမရဲ့ ဇာတ်ကားတွေကိုမကြည့်ဖြစ်တော့ဘူးလို့လည်း သူက ပြောပါသေးတယ်။
” သူ ရန်ကုန်ကို လာသွားတုန်းက ပွဲတစ်ပွဲမှာ ဆုံဖူးပါတယ်။သူက အပြင်မှာလည်း တကယ့်ကို နှစ်လိုဖွယ်ကောင်းတဲ့သူပါ။အဲ့ဒီတုန်းက ကျွန်တော် သူနဲ့ ဓာတ်ပုံတွဲရိုက်ဖို့အတွက် စိတ်တွေလှုပ်ရှားပြီး ပျာယာတွေခတ်နေတာပဲ ” လို့ Davika နဲ့ အပြင်မှာဆုံခဲ့တုန်းက အတွေ့အကြုံတွေကို ထွန်းထွန်းက မျှဝေခဲ့ပါသေးတယ်။
အခုလက်ရှိမှာတော့ ထွန်းထွန်း ဟာ stay home ကာလကို အိမ်မှာပဲ ဖြတ်သန်းနေပြီး ဒီကာလကြီး ကျော်လွန်ပြီးသွားပါက Examplez အဖွဲ့နဲ့အတူ အနုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေ ပြန်လည်လုပ်ဆောင်ဖို့ စီစဉ်နေတယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။
Netflix series ” Dark ” ရဲ့ season3ကိုပရိတျသတျတှေ မွငျတှရေ့တော့မှာလား ?
ဟုတျပါတယျ Neflix မှာပွသခဲ့တဲ့ဒီလူကွိုကျမြားရပေနျးစားတဲ့ ဂြာမာနျ series Dark ရဲ့ season3ထုတျလှငျ့မယျ့ရကျကို Netflix က တရားဝငျကွညောထားခွငျးမရှိတဲအတှကျပရိတျသတျတှကေ သို့ လောသို့လောနဲ့ စောငျ့ဆိုငျးနကွေရတာဖွဈပါတယျ။
အခုခြိနျမှာတော့ဒီ series မှာအဓိက သရုပျဆောငျတှအေနနေဲ့ ပါဝငျထားကွတဲ့ မငျးသားလေး Louis Hofmann နဲ့ မငျးသမီးလေး Lisa Vicari တို့ နှဈယောကျဟာ “The last cycle starts soon” “tick,tock ” ဆိုတဲ့ caption လေးတှကေိုယျစီနဲ့ Dark ရုပျရှငျထဲက image တှကေို instagram မှာ ဝမြှေခဲ့ တာပဲ ဖွဈပါတယျ။
အဲ့ ဒါကွောငျ့ ” Dark ” season3ကို ပရိတျသတျတှေ အနနေဲ့ မွငျရဖို့ နီးနပွေီပဲ ဖွဈပါတယျ ။
Dark season 1 ကို Netflix ကနေ ၂၀၁၇ခုနဈ ဒီဇငျဘာ ၃ ရကျနမှေ့ာ စတငျထုတျလှငျ့ခဲ့တာဖွဈပွီး ရုပျရှငျဝဖေနျရေးသမားတှရေဲ့ခြီးကြူးမှုတှေ rating ကောငျးတှကေိုပိုငျဆိုငျခဲ့ပါတယျ။ Season2ကိုတော့ ၂၀၁၉ ခုနဈ ဇှနျလ ၂၁ ရကျနမှေ့ာထုတျလှငျ့ခဲ့ပွီး နောကျထပျအောငျမွငျမှုတှရေခဲ့ပါတယျ။ Season နှဈခုပေါငျး 18 ပိုငျးသာရှိခဲ့တဲ့ ” Dark ” ဇာတျလမျးတှဲရဲ့ season3ဟာ final season ဖွဈလာမယျလို့လညျးသိရပါတယျ။
source : popculturetimes
Netflix series ” Dark ” ရဲ့ season3ကိုပရိတ်သတ်တွေ မြင်တွေ့ရတော့မှာလား ?
ဟုတ်ပါတယ် Neflix မှာပြသခဲ့တဲ့ဒီလူကြိုက်များရေပန်းစားတဲ့ ဂျာမာန် series Dark ရဲ့ season3ထုတ်လွှင့်မယ့်ရက်ကို Netflix က တရားဝင်ကြေညာထားခြင်းမရှိတဲအတွက်ပရိတ်သတ်တွေက သို့ လောသို့လောနဲ့ စောင့်ဆိုင်းနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။
အခုချိန်မှာတော့ဒီ series မှာအဓိက သရုပ်ဆောင်တွေအနေနဲ့ ပါဝင်ထားကြတဲ့ မင်းသားလေး Louis Hofmann နဲ့ မင်းသမီးလေး Lisa Vicari တို့ နှစ်ယောက်ဟာ “The last cycle starts soon” “tick,tock ” ဆိုတဲ့ caption လေးတွေကိုယ်စီနဲ့ Dark ရုပ်ရှင်ထဲက image တွေကို instagram မှာ ဝေမျှခဲ့ တာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။
အဲ့ ဒါကြောင့် ” Dark ” season3ကို ပရိတ်သတ်တွေ အနေနဲ့ မြင်ရဖို့ နီးနေပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။
Dark season 1 ကို Netflix ကနေ ၂၀၁၇ခုနစ် ဒီဇင်ဘာ ၃ ရက်နေ့မှာ စတင်ထုတ်လွှင့်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး ရုပ်ရှင်ဝေဖန်ရေးသမားတွေရဲ့ချီးကျူးမှုတွေ rating ကောင်းတွေကိုပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပါတယ်။Season2ကိုတော့ ၂၀၁၉ ခုနစ် ဇွန်လ ၂၁ ရက်နေ့မှာထုတ်လွှင့်ခဲ့ပြီး နောက်ထပ်အောင်မြင်မှုတွေရခဲ့ပါတယ်။ Season နှစ်ခုပေါင်း 18 ပိုင်းသာရှိခဲ့တဲ့ ” Dark “ဇာတ်လမ်းတွဲရဲ့ season3ဟာ final season ဖြစ်လာမယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။
Deadpool2ရုပျရှငျထဲကဇာတျဝငျခနျးအတှကျသရုပျဆောငျကွေးကို အံ့အားသငျ့စှာတောငျးခဲ့တဲ့ Brad Pitt
May 21, 2020 by Shwengwe Games
မငျးသား Ryan Reynolds ရဲ့ Deadpool2ရုပျရှငျထဲက ဓာတျလိုကျတဲ့ အခနျးလေးမှာ cameo ( ဧညျ့သညျသရုပျဆောငျ ) အနနေဲ့ ပါဝငျပေးခဲ့တဲ့ ကမ်ဘာကြျောမငျးသားကွီး Brad Pitt ကို အားလုံးပဲ သတိထားမိကွမှာပါ။
ဒီရုပျရှငျမှာ cameo အနနေဲ့ ပါဝငျပေးဖို့ မငျးသား Ryan Reynolds က Brad Pitt ဆီကို ကိုယျတိုငျ စာရေးပွီး တောငျးဆိုခဲ့ တာဖွဈပါတယျ။ Brad Pitt ကလဲ Ryan ရဲ့ idea ကိုသဘောကတြဲ့ အတှကျ လကျခံခဲ့ ပါတယျ။
ဒီရုပျရှငျမှာ Brad Pitt ပါဝငျခဲ့ ရတဲ့ cameo time က စက်ကနျ့ ဝကျမြှသာရှိပါတယျ။ အဲ့ဒီ စက်ကနျ့ ဝကျစာ ဇာတျဝငျခနျးလေးကို ရိုကျကူးဖို့ အခြိနျ ၇ မိနဈသာကွာခဲ့ ပါတယျ။
ဒီလို cameo အနနေဲ့ ပါဝငျပေးခဲ့ တဲ့ ကမ်ဘာကြျောမငျးသား Brad Pitt က သရုပျဆောငျကွေးတှေ ဘာတှေ လကျမခံခဲ့ဘဲ Ryan Reynolds ကို သူ့ အတှကျ Starbucks ကျောဖီတဈခှကျသာ ပို့ ပေးဖို့ တောငျးဆိုခဲ့ ပါတယျ။
တဈနညျးအားဖွငျ့ပွောရရငျ Brad Pitt ဟာ Ryan Reynolds ဆီက ကျောဖီတဈခှကျအတှကျ cameo အဖွဈပါဝငျပေးဖို့ သဘောတူခဲ့ တာလို့လညျးပွောလို့ရပါတယျ။
ဘာသာပွနျ Mg Kaung (Thadinlaynyin)
Deadpool2ရုပ်ရှင်ထဲကဇာတ်ဝင်ခန်းအတွက်သရုပ်ဆောင်ကြေးကို အံ့အားသင့်စွာတောင်းခဲ့တဲ့ Brad Pitt
မင်းသား Ryan Reynolds ရဲ့ Deadpool2ရုပ်ရှင်ထဲက ဓာတ်လိုက်တဲ့ အခန်းလေးမှာ cameo ( ဧည့်သည်သရုပ်ဆောင် ) အနေနဲ့ ပါဝင်ပေးခဲ့တဲ့ ကမ္ဘာကျော်မင်းသားကြီး Brad Pitt ကို အားလုံးပဲ သတိထားမိကြမှာပါ။
ဒီရုပ်ရှင်မှာ cameo အနေနဲ့ ပါဝင်ပေးဖို့ မင်းသား Ryan Reynolds က Brad Pitt ဆီကို ကိုယ်တိုင် စာရေးပြီး တောင်းဆိုခဲ့ တာဖြစ်ပါတယ်။ Brad Pitt ကလဲ Ryan ရဲ့ idea ကိုသဘောကျတဲ့ အတွက် လက်ခံခဲ့ ပါတယ်။
ဒီရုပ်ရှင်မှာ Brad Pitt ပါဝင်ခဲ့ ရတဲ့ cameo time က စက္ကန့် ဝက်မျှသာရှိပါတယ်။ အဲ့ဒီ စက္ကန့် ဝက်စာ ဇာတ်ဝင်ခန်းလေးကို ရိုက်ကူးဖို့ အချိန် ၇ မိနစ်သာကြာခဲ့ ပါတယ်။
ဒီလို cameo အနေနဲ့ ပါဝင်ပေးခဲ့ တဲ့ ကမ္ဘာကျော်မင်းသား Brad Pitt က သရုပ်ဆောင်ကြေးတွေ ဘာတွေ လက်မခံခဲ့ဘဲ Ryan Reynolds ကို သူ့ အတွက် Starbucks ကော်ဖီတစ်ခွက်သာ ပို့ ပေးဖို့ တောင်းဆိုခဲ့ ပါတယ်။
တစ်နည်းအားဖြင့်ပြောရရင် Brad Pitt ဟာ Ryan Reynolds ဆီက ကော်ဖီတစ်ခွက်အတွက် cameo အဖြစ်ပါဝင်ပေးဖို့ သဘောတူခဲ့ တာလို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်။
ဆနျးသဈတဲ့ Idea နဲ့ Pre-weddingဓာတျပုံရိုကျကူးခဲ့တဲ့ Wonder Girls အဖှဲ့ဝငျဟောငျး Lim
” Nobody ” သီခငျြးနဲ့ ကပေေါ့ဂီတကို ကမ်ဘာကသိအောငျထိုးဖောကျခဲ့တဲ့ တောငျကိုရီးယား စီနီယာ Idol အဖှဲ့တဈဖှဲ့ဖွဈတဲ့ Wonder Girls အဖှဲ့က အဖှဲ့ဝငျဟောငျး Lim ကတော့ သူမရဲ့ pre-wedding photo ကို instagram မှာတငျခဲ့ပါတယျ။
၇ နှဈကြျောကွာတှဲလာတဲ့ သူမရဲ့ ခဈြသူကတော့ နာမညျကြျော တိုကျကှမျဒိုကစားသမားတဈဦးဖွဈပွီး သူမတို့နှဈဦးဟာ လာမယျ့ ဇူလိုငျလထဲမှာ လကျထပျဖို့ စီစဉျထားတာဖွဈပါတယျ။အခုအခါမှာတော့ သူမတို့နှဈဦးရဲ့ pre-wedding ဓာတျပုံတှကွေောငျ့ ပရိတျသတျတှေ အထူးစိတျဝငျစားလြှကျရှိပါတယျ။
ဓာတျပုံထဲမှာတော့ Lim ဟာ သူမရဲ့ ခငျပှနျးလောငျးအပါအဝငျ သူမ ခငျပှနျးလောငျးရဲ့ လုပျဖျောကိုငျဖကျ ကစားသမားတှနေဲ့ အတူ ဓာတျပုံအလနျးစားရိုကျကူးခဲ့တာပါ။ဓာတျပုံထဲမှာကွညျ့မယျဆိုရငျ သူမရဲ့ ခငျပှနျးလောငျးဟာ တိုကျကှမျဒို ဝတျစုံပုံစံ အနကျရောငျ သတို့သားဝတျစုံကို ဝတျဆငျထားပွီ ဘေးက အခွားကစားသမားတှဟောလညျး အဖွူရောငျ တိုကျကှမျဒို ဝတျစုံတှကေို ဝတျဆငျထားကွပါတယျ။
ဒါ့အပွငျ Lim ဟာလညျး အဖွူရောငျဂါဝနျကို ရှရေောငျ ဒေါကျမွငျ့ဖိနပျနဲ့ တှဲဖကျဝတျဆငျထားပွီး ဒူးခေါငျးထိရှညျတဲ့ adidas ခွစှေပျကိုလညျး အထာကကြဝြတျဆငျထားပါတယျ။ဒါတငျမကသေးဘဲ သူမတို့အားလုံးဟာ ဓာတျပုံရိုကျတဲ့အခြိနျမှာ လကျမောငျးကို မွှောကျပွီး အတူတူ pose ပေးခဲ့ကွပါသေးတယျ။
Lim တို့စုံတှဲရဲ့ ထူးခွားဆနျးသဈတဲ့ wedding photo idea ကွောငျ့ ပရိတျသတျတှကေ သဘောကလြှကျရှိပွီး ခြီးကြူး ဂုဏျပွုတဲ့ မှတျခကျြတှေ ဝငျရောကျရေးသားခဲ့ကွပါတယျ။
ဆန်းသစ်တဲ့ Idea နဲ့ Pre-weddingဓာတ်ပုံရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ Wonder Girls အဖွဲ့ဝင်ဟောင်း Lim
” Nobody ” သီချင်းနဲ့ ကေပေါ့ဂီတကို ကမ္ဘာကသိအောင်ထိုးဖောက်ခဲ့တဲ့ တောင်ကိုရီးယား စီနီယာ Idol အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ Wonder Girls အဖွဲ့က အဖွဲ့ဝင်ဟောင်း Lim ကတော့ သူမရဲ့ pre-wedding photo ကို instagram မှာတင်ခဲ့ပါတယ်။
၇ နှစ်ကျော်ကြာတွဲလာတဲ့ သူမရဲ့ ချစ်သူကတော့ နာမည်ကျော် တိုက်ကွမ်ဒိုကစားသမားတစ်ဦးဖြစ်ပြီး သူမတို့နှစ်ဦးဟာ လာမယ့် ဇူလိုင်လထဲမှာ လက်ထပ်ဖို့ စီစဉ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။
အခုအခါမှာတော့ သူမတို့နှစ်ဦးရဲ့ pre-wedding ဓာတ်ပုံတွေကြောင့် ပရိတ်သတ်တွေ အထူးစိတ်ဝင်စားလျှက်ရှိပါတယ်။
ဓာတ်ပုံထဲမှာတော့ Lim ဟာ သူမရဲ့ ခင်ပွန်းလောင်းအပါအဝင် သူမ ခင်ပွန်းလောင်းရဲ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် ကစားသမားတွေနဲ့ အတူ ဓာတ်ပုံအလန်းစားရိုက်ကူးခဲ့တာပါ။
ဓာတ်ပုံထဲမှာကြည့်မယ်ဆိုရင် သူမရဲ့ ခင်ပွန်းလောင်းဟာ တိုက်ကွမ်ဒို ဝတ်စုံပုံစံ အနက်ရောင် သတို့သားဝတ်စုံကို ဝတ်ဆင်ထားပြီ ဘေးက အခြားကစားသမားတွေဟာလည်း အဖြူရောင် တိုက်ကွမ်ဒို ဝတ်စုံတွေကို ဝတ်ဆင်ထားကြပါတယ်။ ဒါ့အပြင် Lim ဟာလည်း အဖြူရောင်ဂါဝန်ကို ရွှေရောင် ဒေါက်မြင့်ဖိနပ်နဲ့ တွဲဖက်ဝတ်ဆင်ထားပြီး ဒူးခေါင်းထိရှည်တဲ့ adidas ခြေစွပ်ကိုလည်း အထာကျကျဝတ်ဆင်ထားပါတယ်။
ဒါတင်မကသေးဘဲ သူမတို့အားလုံးဟာ ဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့အချိန်မှာ လက်မောင်းကို မြှောက်ပြီး အတူတူ pose ပေးခဲ့ကြပါသေးတယ်။
Lim တို့စုံတွဲရဲ့ ထူးခြားဆန်းသစ်တဲ့ wedding photo idea ကြောင့် ပရိတ်သတ်တွေက သဘောကျလျှက်ရှိပြီး ချီးကျူး ဂုဏ်ပြုတဲ့ မှတ်ချက်တွေ ဝင်ရောက်ရေးသားခဲ့ကြပါတယ်။
ဘာသာပြန် Mg Kaung (Thadinlaynyin)
ရီဟားနားရဲ့ သီခငျြးအယျလျဘမျသဈကို စောငျ့မြှျောနတေဲ့ အရေီယာနာဂရနျဒီ
မကွာမီထှကျရှိလာတော့မယျလို့သတငျးပွေးနတေဲ့ အဆိုတျောရီဟာနားရဲ့ သီခငျြးအယျလျဘမျသဈကို မြှျောလငျ့စောငျ့စားနသေူတှထေဲမှာ သာမနျပရိသတျတှသောမက အရေီယာနာဂရနျဒီလို ဘဝတူအဆိုတျောတှေ လညျး ပါဝငျကွောငျး Celebrity Insider သတငျးဝကျဘျဆိုကျက ဖျောပွထားပါတယျ။
ပေါ့ပျသီခငျြးတှနေဲ့ပတျသကျပွီး ဆနျးသဈတီထှငျမှုတှလေုပျတတျတဲ့ ရီဟာနားဟာ မကွာခငျမှာ အယျလျဘမျတဈခှထှေကျဖို့ရှိတယျလို့ ဖှငျ့ဟထားပမေယျ့ အယျလျဘမျထှကျလာမယျ့ အခြိနျအတိအကတြော့ မသိရသေးပါဘူး။
အခုလို အယျလျဘမျထှကျဖို့ ကွနျ့ကွာနတောနဲ့ပတျသကျပွီး အငျတာဗြူးတဈခုမှာ အရေီယာနာဂရနျဒီက “ပရိသတျတှလေိုပဲ ကြှနျမလညျး ရီဟားနားရဲ့အခှသေဈကိုစောငျ့မြှျောနပေါတယျ။ သူ့နရောမှာ ကြှနျမသာဆိုရငျ အယျလျဘမျ အမွနျဆုံးထှကျနိုငျအောငျ ကွိုးစားမှာပါ”လို့ ဖှငျ့ဟပွောကွားခဲ့ပါတယျ။
ရီဟားနားရဲ့ သီချင်းအယ်လ်ဘမ်သစ်ကို စောင့်မျှော်နေတဲ့ အေရီယာနာဂရန်ဒီ
မကြာမီထွက်ရှိလာတော့မယ်လို့သတင်းပြေးနေတဲ့ အဆိုတော်ရီဟာနားရဲ့ သီချင်းအယ်လ်ဘမ်သစ်ကို မျှော်လင့်စောင့်စားနေသူတွေထဲမှာ သာမန်ပရိသတ်တွေသာမက အေရီယာနာဂရန်ဒီလို ဘဝတူအဆိုတော်တွေ လည်း ပါဝင်ကြောင်း Celebrity Insider သတင်းဝက်ဘ်ဆိုက်က ဖော်ပြထားပါတယ်။
ပေါ့ပ်သီချင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဆန်းသစ်တီထွင်မှုတွေလုပ်တတ်တဲ့ ရီဟာနားဟာ မကြာခင်မှာ အယ်လ်ဘမ်တစ်ခွေထွက်ဖို့ရှိတယ်လို့ ဖွင့်ဟထားပေမယ့် အယ်လ်ဘမ်ထွက်လာမယ့် အချိန်အတိအကျတော့ မသိရသေးပါဘူး။
အခုလို အယ်လ်ဘမ်ထွက်ဖို့ ကြန့်ကြာနေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာ အေရီယာနာဂရန်ဒီက “ပရိသတ်တွေလိုပဲ ကျွန်မလည်း ရီဟားနားရဲ့အခွေသစ်ကိုစောင့်မျှော်နေပါတယ်။ သူ့နေရာမှာ ကျွန်မသာဆိုရင် အယ်လ်ဘမ် အမြန်ဆုံးထွက်နိုင်အောင် ကြိုးစားမှာပါ”လို့ ဖွင့်ဟပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
Stay Home ကာလမှာ ခဈြတဲ့သူနဲ့ဝေးနရေလို့မိုးအေးအေးမှာဆှေးနရေတယျဆိုရငျခံစားနားဆငျဖို့သီခငျြး တဈပုဒျတငျပေးခဲ့တဲ့ ဖွူဖွူကြျောသိနျး
May 21, 2020 May 21, 2020 by Shwengwe Games
ဖွူဖွူကြျောသိနျးကတော့ အားလုံးသိပွီးတဲ့အတိုငျး ဆနျးသဈတဲ့အနုပညာဖနျတီးမှုတှနေဲ့ မွနျမာ့ဂီတလောကမှာ ထိပျတနျးနရောရယူထားနိုငျတဲ့ မိနျးကလေး အဆိုရှငျတဈဦးပါ။
အနုပညာလောကထဲမှာ အခွားသူတှနေဲ့ ကှဲထှကျပွီး ကိုယျပိုငျစတိုငျတဈခုကိုပိုငျဆိုငျထားတဲ့ဖွူဖွူကတော့ ဂီတဖနျတီးမှုပိုငျးမှာသာမက ဖကျရှငျပိုငျးမှာလညျး ခတျေရှပွေ့ေးသူဆိုတာ မထေ့ားလို့မရပွနျပါဘူး။
အခုလကျရှိမှာတော့ ဖွူဖွူက Stay Home ကာလမှာ ပရိသတျတှမေပငျြးရအောငျ သီခငျြးတဈပုဒျကို Music Video ရိုကျကူးပေးခဲ့တာပါ။သီခငျြးနာမညျကတော့ “နငျမရှိပဲ” ဖွဈပွီး အဲ့ဒီအကွောငျးကိုတော့
“Lockdown ကာလမှာ Stay at Home စညျးကမျးတှလေိုကျနာပွီး ကွိုးစားရိုကျကူးထားကွတာမို့အားနညျးခကျြနဲ့ လိုအပျခကျြတှရှေိရငျလညျးဖွညျ့စှကျနားလညျအားပေးကွညျ့ရှုပေးကွပါလို့” ဆိုပွီးတော့ သူမရဲ့ Facebook စာမကျြနှာရေးသားထားပါတယျ။
ဒီသီခငျြးလေးရဲ့ Audio Version ကတော့ လှနျခဲ့တဲ့ခွောကျလကထှကျရှိထားတာဖွဈပွီး JOOX အပျပလီကေးရှငျးမှာလညျးနားထောငျလို့ရပါတယျ။ဖွူဖွူကတော့ “ခဈြတဲ့သူနဲ့ဝေးနရေလို့မိုးအေးအေးမှာဆှေးနရေတယျဆိုရငျ ခုပဲဒီသီခငျြးလေးနဲ့ feel လိုကျတော့နျော” ဆိုထားပါသေးတယျ။
ကဲ .. ဒီတော့မိုးအေးအေးနဲ့ဆှေးခငျြသူတှအေတှကျ ဖွူဖွူကြျောသိနျးရဲ့ Music Video လေးကို ပွနျလညျမြှဝပေေးလိုကျပါတယျနျော ။
Stay Home ကာလမှာ ချစ်တဲ့သူနဲ့ဝေးနေရလို့မိုးအေးအေးမှာဆွေးနေရတယ်ဆိုရင်ခံစားနားဆင်ဖို့တစ်ပုဒ်တင်ပေးခဲ့တဲ့ ဖြူဖြူကျော်သိန်း
ဖြူဖြူကျော်သိန်းကတော့ အားလုံးသိပြီးတဲ့အတိုင်း ဆန်းသစ်တဲ့အနုပညာဖန်တီးမှုတွေနဲ့ မြန်မာ့ဂီတလောကမှာ ထိပ်တန်းနေရာရယူထားနိုင်တဲ့ မိန်းကလေး အဆိုရှင်တစ်ဦးပါ။
အနုပညာလောကထဲမှာ အခြားသူတွေနဲ့ ကွဲထွက်ပြီး ကိုယ်ပိုင်စတိုင်တစ်ခုကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ဖြူဖြူကတော့ ဂီတဖန်တီးမှုပိုင်းမှာသာမက ဖက်ရှင်ပိုင်းမှာလည်း ခေတ်ရှေ့ပြေးသူဆိုတာ မေ့ထားလို့မရပြန်ပါဘူး။
အခုလက်ရှိမှာတော့ ဖြူဖြူက Stay Home ကာလမှာ ပရိသတ်တွေမပျင်းရအောင် သီချင်းတစ်ပုဒ်ကို Music Video ရိုက်ကူးပေးခဲ့တာပါ။သီချင်းနာမည်ကတော့ “နင်မရှိပဲ” ဖြစ်ပြီး အဲ့ဒီအကြောင်းကိုတော့ “Lockdown ကာလမှာ Stay at Home စည်းကမ်းတွေလိုက်နာပြီး ကြိုးစားရိုက်ကူးထားကြတာမို့အားနည်းချက်နဲ့ လိုအပ်ချက်တွေရှိရင်လည်းဖြည့်စွက်နားလည်အားပေးကြည့်ရှုပေးကြပါလို့” ဆိုပြီးတော့ သူမရဲ့ Facebook စာမျက်နှာရေးသားထားပါတယ်။
ဒီသီချင်းလေးရဲ့ Audio Version ကတော့ လွန်ခဲ့တဲ့ခြောက်လကထွက်ရှိထားတာဖြစ်ပြီး JOOX အပ်ပလီကေးရှင်းမှာလည်းနားထောင်လို့ရပါတယ်။
ဖြူဖြူကတော့ “ချစ်တဲ့သူနဲ့ဝေးနေရလို့မိုးအေးအေးမှာဆွေးနေရတယ်ဆိုရင် ခုပဲဒီသီချင်းလေးနဲ့ feel လိုက်တော့နော်” ဆိုထားပါသေးတယ်။
ကဲ .. ဒီတော့မိုးအေးအေးနဲ့ဆွေးချင်သူတွေအတွက် ဖြူဖြူကျော်သိန်းရဲ့ Music Video လေးကို ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နော် ။
အကြိုးရှိမယျ့ challenge လေးတဈခုပွုလုပျဖို့ ပရိတျသတျတှကေို စိနျချေါလိုကျတဲ့ နထေူးနိုငျ
ကိုဗဈကာလမှာ အနုပညာရှငျတှဟော တဈယောကျနဲ့တဈယောကျအပွိုငျအဆိုငျ ပြျောစရာ challenge လေးတှေ ပွုလုပျနကွေတာကို ပရိတျသတျတှလေညျး သိပွီးသားဖွဈမှာပါ။
အခုတဈခါမှာလညျးနောကျထပျ အနု ပညာရှငျတဈဦးဖွဈတဲ့ သရုပျဆောငျနထေူးနိုငျကသူ့ရဲ့ ပရိတျသတျတှကေို challenge တဈခုပွုလုပျဖို့ စိနျချေါလိုကျပွနျပါပွီ။
ပရိသတျတှရေဲ့ အခဈြတျော အကျရှငျမငျးသားနထေူးနိုငျကတော့ သူ့ရဲ့ ပရိသတျတှကေို သဈပငျစိုကျဖို့ Challengeလေးတဈခုချေါခဲ့ပါတယျ။အပူဒဏျကို ကာကှယျနိုငျဖို့ရညျရှယျခကျြနဲ့ အခုလို Challenge လေးကို ပွိုငျပှဲသဘောမြိုးနဲ့ လုပျဖို့ ချေါခဲ့တာပဲဖွဈပါတယျ။ နထေူးနိုငျက ကိုယျတိုငျလညျး ကမ်ဘာမွေ စိမျးလနျးသာယာပွီး အပူဒဏျကို ကာကှယျဖို့ သဈပငျတှကေို စိုကျပြိုးသလို ပရိသတျတှကေိုလညျး သဈပငျစိုကျဖို့ Challenge ချေါလိုကျတာပါ။
Challenge လေးမှာတော့ ကိုယျရဲ့ ခွံဝနျးအတှငျးမှာပဲဖွဈဖွဈ အခွားသော အမြားပွညျသူနှငျ့သကျဆိုငျသညျ့ နရောမြားတှငျ ဖွဈဖွဈ အပငျတှစေိုကျပြိုးရမှာဖွဈပွီး အပငျအရအေတှကျအမြားဆုံးရှငျသနျအောငျစိုကျနိုငျသူ၊ အရိပျရပွီး လူသားတို့အတှကျအကြိုးဖွဈထှနျးမှုအမြားဆုံးရရှိအောငျစိုကျပြိုးနိုငျသူ၊ ရပေေးဝမှေုစနဈ အကောငျးဆုံးဖွငျ့ အပငျစိုကျနိုငျသူဆိုကာ(၃)ဦးကိုရှေးခယျြပွီးနထေူးနိုငျကိုယျတိုငျ အိမျတိုငျရာရောကျ ဆုလာရောကျ ခြီးမွှငျ့ ပေးသှားဦးမှာပါတဲ့။
မွနျမာနိုငျငံအတှငျး ဘယျနရောတှငျ‌နထေိုငျသူဖွဈပါစေ နထေူးနိုငျကကိုယျတိုငျ အိမျတိုငျရာရောကျ လာရောကျ၍ဆုခြီးမွှငျ့မှာဖွဈပွီး ပွိုငျပှဲကာလကိုတော့ ယခု ကနစေပွီး (၆) လ တိတိ သတျမှတျပါတယျတဲ့။ပွိုငျပှဲဝငျလိုတဲ့ သူတှကေတော့ မစိုကျပြိုးခငျ မွအေနအေထား၊ ပတျဝနျးကငျြနှငျ့ (၆)လအကွာ စိုကျပြိုးပွီး အပငျအနအေထား၊ ပတျဝနျးကငျြအား ဓါတျပုံရိုကျပွီး နထေူးနိုငျကို Messengerသို့ပေးပို့ရမှာပါတဲ့ ပရိသတျကွီးရေ။
အကျိုးရှိမယ့် challenge လေးတစ်ခုပြုလုပ်ဖို့ ပရိတ်သတ်တွေကို စိန်ခေါ်လိုက်တဲ့ နေထူးနိုင်
ကိုဗစ်ကာလမှာ အနုပညာရှင်တွေဟာ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်အပြိုင်အဆိုင် ပျော်စရာ challenge လေးတွေ ပြုလုပ်နေကြတာကို ပရိတ်သတ်တွေလည်း သိပြီးသားဖြစ်မှာပါ။
အခုတစ်ခါမှာလည်းနောက်ထပ် အနု ပညာရှင်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ သရုပ်ဆောင် နေထူးနိုင်ကသူ့ရဲ့ ပရိတ်သတ်တွေကို challenge တစ်ခုပြုလုပ်ဖို့ စိန်ခေါ်လိုက်ပြန်ပါပြီ။
ပရိသတ်တွေရဲ့ အချစ်တော် အက်ရှင်မင်းသားနေထူးနိုင်ကတော့ သူ့ရဲ့ ပရိသတ်တွေကို သစ်ပင်စိုက်ဖို့ Challengeလေးတစ်ခုခေါ်ခဲ့ပါတယ်။အပူဒဏ်ကို ကာကွယ်နိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ အခုလို Challenge လေးကို ပြိုင်ပွဲသဘောမျိုးနဲ့ လုပ်ဖို့ ခေါ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ နေထူးနိုင်က ကိုယ်တိုင်လည်း ကမ္ဘာမြေ စိမ်းလန်းသာယာပြီး အပူဒဏ်ကို ကာကွယ်ဖို့ သစ်ပင်တွေကို စိုက်ပျိုးသလို ပရိသတ်တွေကိုလည်း သစ်ပင်စိုက်ဖို့ Challenge ခေါ်လိုက်တာပါ။
Challenge လေးမှာတော့ ကိုယ်ရဲ့ ခြံဝန်းအတွင်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ် အခြားသော အများပြည်သူနှင့်သက်ဆိုင်သည့် နေရာများတွင် ဖြစ်ဖြစ် အပင်တွေစိုက်ပျိုးရမှာဖြစ်ပြီး အပင်အရေအတွက်အများဆုံးရှင်သန်အောင်စိုက်နိုင်သူ၊ အရိပ်ရပြီး လူသားတို့အတွက်အကျိုးဖြစ်ထွန်းမှုအများဆုံးရရှိအောင်စိုက်ပျိုးနိုင်သူ၊ ရေပေးဝေမှုစနစ် အကောင်းဆုံးဖြင့် အပင်စိုက်နိုင်သူဆိုကာ (၃)ဦးကိုရွေးချယ်ပြီး နေထူးနိုင်ကိုယ်တိုင် အိမ်တိုင်ရာရောက် ဆုလာရောက် ချီးမြှင့် ပေးသွားဦးမှာပါတဲ့။
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ဘယ်နေရာတွင်‌နေထိုင်သူဖြစ်ပါစေ နေထူးနိုင်ကကိုယ်တိုင် အိမ်တိုင်ရာရောက် လာရောက်၍ဆုချီးမြှင့်မှာဖြစ်ပြီး ပြိုင်ပွဲကာလကိုတော့ ယခု ကနေစပြီး (၆) လ တိတိ သတ်မှတ်ပါတယ်တဲ့။ ပြိုင်ပွဲဝင်လိုတဲ့ သူတွေကတော့ မစိုက်ပျိုးခင် မြေအနေအထား၊ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် (၆)လအကြာ စိုက်ပျိုးပြီး အပင်အနေအထား၊ ပတ်ဝန်းကျင်အား ဓါတ်ပုံရိုက်ပြီး နေထူးနိုင်ကို Messengerသို့ပေးပို့ရမှာပါတဲ့ ပရိသတ်ကြီးရေ။
ရိုမတျတဈဆနျတဲ့ ဇာတျလမျးတှဲအသဈမှာ ပါဝငျသရုပျဆောငျမယျ့ WINNER အဖှဲ့ဝငျ Kang Seung Yoon
ကနျစှနျးရိုးလို့ မွနျမာပွညျက ပရိတျသတျတှခေဈြစနိုးနဲ့ ချေါတဲ့ Winner အဖှဲ့ဝငျ Kang Seung Yoon ကတော့ MBC ရဲ့ drama အသဈမှာ ပါဝငျသရုပျဆောငျသှားဖို့ရှိပါတယျ။ဒီသတငျးကိုတော့ Kang Seung Yoon ရဲ့ အဂေငျြစီဖွဈတဲ့ YG Entertainment ကနေ မလေ ၂၀ ရကျနမှေ့ာ အတညျပွုပွောကွားထားပါတယျ။
” Kairos ” လို့ အမညျပေးထားတဲ့ ဒီဇာတျလမျးတှဲကတော့ romantic fantasy thriller ဇာတျလမျးတှဲအမြိုးအစားဖွဈပွီး မငျးသား Shin Sung Rok နဲ့ မငျးသမီး Lee Se Young တို့က အဓိကပါဝငျသရုပျဆောငျကွမှာပါ။ Kang Seung Yoon ကတော့ Lee Se Young ရဲ့ သူငယျခငျြးနရောက ပါဝငျမှာပဲဖွဈပါတယျ။
High Kick ဇာတျလမျးတှဲနဲ့ သရုပျဆောငျနယျပယျမှာ ပှဲဦးထှကျခဲ့တဲ့ Kang Seung Yoon ဟာ သူနောကျဆုံးရိုကျကူးခဲ့တဲ့ ဇာတျလမျးတှဲပွီးတဲ့နောကျ ၂ နှဈအကွာမှ အခုလို ဇာတျလမျးတှဲတဈခုမှာ ပွနျလညျသရုပျဆောငျခွငျးဖွဈပါတယျ။
” ဇာတျညှနျးကို ဖတျကွညျ့ပွီးသှားပွီ။ အကွာကွီးနမှေ အခုလို ပွနျပွီးသရုပျဆောငျရမှာဖွဈတဲ့အတှကျ အရမျးလညျး စိတျလှုပျရှားမိပါတယျ။ ကြှနျတေျာ့မှာ လလေ့ာသငျယူစရာတှအေမြားကွီးရှိသေးပမေယျ့ ကြှနျတျောနဲ့ တှဲဖကျသရုပျဆောငျရမယျ့သူတှေ အခကျအခဲမဖွဈရအောငျ အကောငျးဆုံးကွိုးစားသှားမှာပါ ” လို့ Kang Seung Yoon က ပွောထားပါတယျ။
ရိုမတ်တစ်ဆန်ဆန် ဇာတ်လမ်းတွဲအသစ်မှာ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်မယ့် WINNER အဖွဲ့ဝင် Kang Seung Yoon
ကန်စွန်းရိုးလို့ မြန်မာပြည်က ပရိတ်သတ်တွေချစ်စနိုးနဲ့ ခေါ်တဲ့ Winner အဖွဲ့ဝင် Kang Seung Yoon ကတော့ MBC ရဲ့ drama အသစ်မှာ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်သွားဖို့ရှိပါတယ်။
ဒီသတင်းကိုတော့ Kang Seung Yoon ရဲ့ အေဂျင်စီဖြစ်တဲ့ YG Entertainment ကနေ မေလ ၂၀ ရက်နေ့မှာ အတည်ပြုပြောကြားထားပါတယ်။
” Kairos ” လို့ အမည်ပေးထားတဲ့ ဒီဇာတ်လမ်းတွဲကတော့ romantic fantasy thriller ဇာတ်လမ်းတွဲအမျိုးအစားဖြစ်ပြီး မင်းသား Shin Sung Rok နဲ့ မင်းသမီး Lee Se Young တို့က အဓိကပါဝင်သရုပ်ဆောင်ကြမှာပါ။ Kang Seung Yoon ကတော့ Lee Se Young ရဲ့ သူငယ်ချင်းနေရာက ပါဝင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
High Kick ဇာတ်လမ်းတွဲနဲ့ သရုပ်ဆောင်နယ်ပယ်မှာ ပွဲဦးထွက်ခဲ့တဲ့ Kang Seung Yoon ဟာ သူနောက်ဆုံးရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲပြီးတဲ့နောက် ၂ နှစ်အကြာမှ အခုလို ဇာတ်လမ်းတွဲတစ်ခုမှာ ပြန်လည်သရုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
” ဇာတ်ညွှန်းကို ဖတ်ကြည့်ပြီးသွားပြီ။ အကြာကြီးနေမှ အခုလို ပြန်ပြီးသရုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက် အရမ်းလည်း စိတ်လှုပ်ရှားမိပါတယ်။ ကျွန်တော့်မှာ လေ့လာသင်ယူစရာတွေအများကြီးရှိသေးပေမယ့် ကျွန်တော်နဲ့ တွဲဖက်သရုပ်ဆောင်ရမယ့်သူတွေ အခက်အခဲမဖြစ်ရအောင် အကောင်းဆုံးကြိုးစားသွားမှာပါ ” လို့ Kang Seung Yoon က ပြောထားပါတယ်။
သီဟတငျစိုး နှငျ့ပတျသတျပွီး မိသားစုတာဝနျ ကပြှေနျတဲ့ ညီမဖွဈသူ ဆီကို လာမပွောကွဖို့ပွောလိုကျတဲ့ စညျသူတငျစိုး
ရုပျရှငျနဲ့ ဗီဒီယိုသရုပျဆောငျ သီဟတငျစိုးက ငှကွေေးအရှုပျအရှငျးကိစ်စတှကွေောငျ့ ကြိုကျလတျမွို့မှာ အမှုဖှငျ့အရေးယူခံထားရတယျလို့ သတငျးတှထှေကျပျေါနတောပဲ ဖွဈပါတယျ။ သီဟတငျစိုးတို့မိသားစုဟာ ငှကွေေးခိုငျမာတောငျ့တငျးသူတှဖွေဈပွီး အခုလိုကိစ်စမြိုးနဲ့ ပကျသတျပွီး ပရိသတျတှကေ အမြိုးမြိုး ဝဖေနျနကွေတာပဲ ဖွဈပါတယျ။ ထိုကိစ်စနဲ့ ပကျသတျပွီး သီဟတငျစိုးရဲ့ ညီအရငျးဖွဈသူ စညျသူတငျစိုးက အခုလိုပဲ ပှငျ့လငျးစှာခပြွပွောဆိုလာပါတယျ။
“အမကေ ဘယျသူ့ဘယျသူအပျေါမှ မတရားလုပျထားတာမရှိဘူး။ အားလုံးညီတူမြှတူပဲ။ သူမိနျးမယူတဲ့အခြိနျတုနျးကလညျးအမကေသူ့မိနျးမရဲ့နောကျကွောငျးအရှုပျထုပျတှကေိုငှထေုပျပိုကျပွီးတဖကျလူကိုခွထေောကျဖကျတောငျးပနျပွီးလြှျောကွေးပေးခဲ့ရတာ အားလုံးသိတယျ။ သူသာ အကိုကွီးအဖရာအနနေဲ့ရော သားကွီးသွရသအနနေဲ့ရော နောကျဆုံးသူကိုယျတိုငျမှေးထားတဲ့ သူကလေးတှေ အပျေါမှာရော ဘယျတဈခုမှတာဝနျမကခြေဲ့ဘူး။ လငျမယားနှဈယောကျလုံးပြျောပြျောပါးပါး တကျညီလကျညီသုံးဖွုံနျးလိုကျကွတာမြား ခုဆို သူတို့ရဲ့ကလေး၂ယောကျစလုံးကိုပါ ကြောငျးထုတျပွဈထားတဲ့အထိ။”
“ကောငျးစားစဉျကလညျး အဖဆေီ့ကိုလငျမယားနှဈယောကျလုံးမသှားဘူး။ မလာဘူး။ သီတငျးကြှတျတောငျသှားမကနျခဲ့ကွဖူးဘူး၊၊သူတို့ဒုက်ခရောကျလို့ငတျပွတျတဲ့အခြိနျကွမှ အဖကေို့သှားအပူကပျ၊ငိုပွ၊နှိပျစကျလိုကျကွတာ အဖဟောစိတျဆငျးရဲကိုယျဆငျးရဲနဲ့ဆုံးသှားခဲ့ရတဲ့အထိပဲ၊၊ ပိုဈ့တငျထားတဲ့ဟိုတဈယောကျရော သူ့ကိုသိပျခဈြကွ ၊သိပျအပွဈကငျးတယျထငျပွီးလိုငျးပျေါမှာအာခြောငျနကွေတဲ့သူတှရေော၊ မနနေိုငျရငျ မကနြေပျရငျစုပေါငျးပွီးသာစိုကျလြှျောပေးလိုကျကွတော့ဗြို့။ ရှမှေ့ာသူတို့လငျမယားမိုကျခဲ့ကွသမြှ ကနျြတေျာ့အမနေောကျကနလေိုကျရှငျးခဲ့ရတာတှကေို တဈခုခငျြးစီပွောပွရရငျစိတျဆငျးရဲပွီးကိုယျ့ကိုယျတောငျသတျသသှေားလိမျ့မယျ။”
“တဈမိသားစုလုံးမှာသမီးမိနျးကလေးတဈယောကျပဲပါလို့ ဝိုငျးပွီးခဈြကွရတဲ့ ကြှနျတော့ညီမ၊ အိမျကစီပှားရေးလုပျငနျးမှနျသမြှသူ့နာမညျပေးခဲ့တဲ့အထိတအိမျလုံးကဝိုငျးခဈြကွတဲ့ကြှနျတေျာ့ညီမ၊ အကိုအကွီးဆုံးကနစေပွီး အကိုအယောကျဆီတိုငျးအပျေါ(သူ့အိမျထောငျနဲ့သူဖွဈနတောတောငျ)တာဝနျကတြောထကျ ပိုပွီး သိတတျတဲ့ကြှနျတေျာ့ညီမ၊ သူတပါးမိသားစုအတှငျးရေးသခြောလညျးမသိဘဲရမျးသနျးအာခြောငျခငျြပွီး သူ တဈခုခုဖွဈတာနဲ့ ကြှနျတေျာ့ ညီမကို လာပွောနကွေတဲ့သူတှေ သသေခြောခြာ ဖတျကွညျ့ပေးပါ။ ဒီထကျမှအသေးစိတျသိခငျြကွသေးတယျဆိုရငျလညျး ကြှနျတေျာ့ဖုနျးနံပတျ ၀၉ ၄၅၁၄၆၆၆၁၆ ကို ဆကျမေးကွပါ။ တဖကျသတျအမွငျနဲ့စိတျထငျရာပေါကျကရတှေ ဝငျရေးဝငျမနျ့နကွေတာ ကြေးဇူးပွုပွီးရပျပေးကွပါ။” လို့ စညျသူတငျစိုးက ပွောထားတာပဲ ဖွဈပါတယျ။
ရုပ်ရှင်နဲ့ ဗီဒီယိုသရုပ်ဆောင် သီဟတင်စိုးက ငွေကြေးအရှုပ်အရှင်းကိစ္စတွေကြောင့် ကျိုက်လတ်မြို့မှာ အမှုဖွင့်အရေးယူခံထားရတယ်လို့ သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သီဟတင်စိုးတို့မိသားစုဟာ ငွေကြေးခိုင်မာတောင့်တင်းသူတွေဖြစ်ပြီး အခုလိုကိစ္စမျိုးနဲ့ ပက်သတ်ပြီး ပရိသတ်တွေက အမျိုးမျိုး ဝေဖန်နေကြတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုကိစ္စနဲ့ ပက်သတ်ပြီး သီဟတင်စိုးရဲ့ ညီအရင်းဖြစ်သူ စည်သူတင်စိုးက အခုလိုပဲ ပွင့်လင်းစွာချပြပြောဆိုလာပါတယ်။
“ကိုယ်တိုင်သေချာမသိပဲ ကြားသုံးကြားထဲဝင်ပါပြီး လိုင်းပေါ်မှာထင်ရာမြင်ရာပြောနေကြလို့အမှန်တရားကိုရှင်းပြတာ။ အမေ့ကိုအမွေတောင်းတယ်။ ကုန်သွားမှာစိုးလို့ မပေးဘူးပြောတော့ အမေ့ကို ဓား နဲ့လိုက်တယ်။ မောင်နှမ၅ယောက်မှာတစ်ဦးချင်းဆီအတွက် သူ့ဝေစု ၊သူရသင့်ရထိုက်တဲ့သိန်းပေါင်း ၁၂၀၀၀ (ငွေကျပ်သိန်းပေါင်းတစ်သောင်းနှစ်ထောင်)ပိုက်၊ပျော်ပျော်ပါးပါးကြီးယူ ထွက်သွားခဲ့တာ။ အမေသေလည်းမလာဘူး၊မောင်နှမတွေသေလည်းမလာဘူးဆိုပြီး တစ်ခါတည်းဆွေခန်းမျိုးခန်းဖြတ် သူကအရင်ဖြတ်သွားတာ။”
“အမေက ဘယ်သူ့ဘယ်သူအပေါ်မှ မတရားလုပ်ထားတာမရှိဘူး။ အားလုံးညီတူမျှတူပဲ။ သူမိန်းမယူတဲ့အချိန်တုန်းကလည်းအမေကသူ့မိန်းမရဲ့နောက်ကြောင်းအရှုပ်ထုပ်တွေကိုငွေထုပ်ပိုက်ပြီးတဖက်လူကိုခြေထောက်ဖက်တောင်းပန်ပြီးလျှော်ကြေးပေးခဲ့ရတာ အားလုံးသိတယ်။ သူသာ အကိုကြီးအဖရာအနေနဲ့ရော သားကြီးသြရသအနေနဲ့ရော နောက်ဆုံးသူကိုယ်တိုင်မွေးထားတဲ့ သူကလေးတွေ အပေါ်မှာရော ဘယ်တစ်ခုမှတာဝန်မကျေခဲ့ဘူး။ လင်မယားနှစ်ယောက်လုံးပျော်ပျော်ပါးပါး တက်ညီလက်ညီသုံးဖြုံန်းလိုက်ကြတာများ ခုဆို သူတို့ရဲ့ကလေး၂ယောက်စလုံးကိုပါ ကျောင်းထုတ်ပြစ်ထားတဲ့အထိ။”
“ကောင်းစားစဉ်ကလည်း အဖေ့ဆီကိုလင်မယားနှစ်ယောက်လုံးမသွားဘူး။ မလာဘူး။ သီတင်းကျွတ်တောင်သွားမကန်ခဲ့ကြဖူးဘူး၊၊သူတို့ဒုက္ခရောက်လို့ငတ်ပြတ်တဲ့အချိန်ကြမှ အဖေ့ကိုသွားအပူကပ်၊ငိုပြ၊နှိပ်စက်လိုက်ကြတာ အဖေဟာစိတ်ဆင်းရဲကိုယ်ဆင်းရဲနဲ့ဆုံးသွားခဲ့ရတဲ့အထိပဲ၊၊ ပိုစ့်တင်ထားတဲ့ဟိုတစ်ယောက်ရော သူ့ကိုသိပ်ချစ်ကြ ၊သိပ်အပြစ်ကင်းတယ်ထင်ပြီးလိုင်းပေါ်မှာအာချောင်နေကြတဲ့သူတွေရော၊ မနေနိုင်ရင် မကျေနပ်ရင်စုပေါင်းပြီးသာစိုက်လျှော်ပေးလိုက်ကြတော့ဗျို့။ ရှေ့မှာသူတို့လင်မယားမိုက်ခဲ့ကြသမျှ ကျန်တော့်အမေနောက်ကနေလိုက်ရှင်းခဲ့ရတာတွေကို တစ်ခုချင်းစီပြောပြရရင်စိတ်ဆင်းရဲပြီးကိုယ့်ကိုယ်တောင်သတ်သေသွားလိမ့်မယ်။”
“တစ်မိသားစုလုံးမှာသမီးမိန်းကလေးတစ်ယောက်ပဲပါလို့ ဝိုင်းပြီးချစ်ကြရတဲ့ ကျွန်တော့ညီမ၊ အိမ်ကစီပွားရေးလုပ်ငန်းမှန်သမျှသူ့နာမည်ပေးခဲ့တဲ့အထိတအိမ်လုံးကဝိုင်းချစ်ကြတဲ့ကျွန်တော့်ညီမ၊ အကိုအကြီးဆုံးကနေစပြီး အကိုအယောက်ဆီတိုင်းအပေါ်(သူ့အိမ်ထောင်နဲ့သူဖြစ်နေတာတောင်)တာဝန်ကျေတာထက် ပိုပြီး သိတတ်တဲ့ကျွန်တော့်ညီမ၊ သူတပါးမိသားစုအတွင်းရေးသေချာလည်းမသိဘဲရမ်းသန်းအာချောင်ချင်ပြီး သူ တစ်ခုခုဖြစ်တာနဲ့ ကျွန်တော့် ညီမကို လာပြောနေကြတဲ့သူတွေ သေသေချာချာ ဖတ်ကြည့်ပေးပါ။ ဒီထက်မှအသေးစိတ်သိချင်ကြသေးတယ်ဆိုရင်လည်း ကျွန်တော့်ဖုန်းနံပတ် ၀၉ ၄၅၁၄၆၆၆၁၆ ကို ဆက်မေးကြပါ။ တဖက်သတ်အမြင်နဲ့စိတ်ထင်ရာပေါက်ကရတွေ ဝင်ရေးဝင်မန့်နေကြတာ ကျေးဇူးပြုပြီးရပ်ပေးကြပါ။” လို့ စည်သူတင်စိုးက ပြောထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။